Lanja miakatra… midina | NewsMada
Miakatra, miakatra, miakatra… Inona izao no tsy miakatra eto amintsika ? Tafakatra 10.000 Ar izao ny kilaon’ny henan’omby tsy mifangaro (mbola misy ambonin’izany aza) raha ny tazana eny an-tsena. Dimanjato sy roa arivo ariary izany ny fahefa-kilao. Izay mantsy, amin’ny ankapobeny ny lanja takatry ny ankamaroan’ny fianakaviana… sahirana. Raha mitohy izao, ho nofinofy sisa izany hihinan-kena izany, afaka taona vitsivitsy eo. “Lanja miakatra” ?. Tsia! Ny lanja mijanona ho lanja ihany fa ny vidiny io misondrotra be io.
Omaly ihany, gaga sy taitra ny mpitatitra sy mpitondra fiara fa niakatra ny vidi-tsolika. 80 Ar ny fiakarany. Lanja miakatra koa izany. Mampiakatra ny hatezeran’ny mpitatitra, mahatsiaro ho maty antoka amin’ny fihazonana ny saran-dalana 400 Ar. Ary koa ny fiandrasana ny fampanantenan’ny fanjakana amin’ny fanampiana azy ireo. Mety hampilanjalanja orona ny mpandeha koa izany; tsy ho zaka tsinona raha hiakatra 500 Ar ny saran-dalana.
Nitranga koa ny fiakarana iray hafa, roa na telo andro teo izay. Fiakaran’ny rano eny ambany tanàna e! Efa dibo-drano izao ny ankamaroan’ny faritra iva eto an-dRenivohitra noho ny fahatsentsenan’ny lakandrano. Tsy mahataitra ny fanjakana izany raha tsy efa tena am-bavafo ny rano. Mbola halohalika izy izao. Ho avy amin’ny fanaterana sy fizarana vary amin’ny kapoaka, bodofotsy… izy rehefa kelikely eo. Efa akaiky rahateo ny fetin’ny krismasy sy faran’ny taona. Hitady anton-javatra hisehosehoana aza atao !
Vao omaly no omaly ny nilazana teto fa araka ny tarehimarika navoakan’ny Banky iraisam-pirenena, 90 isan-jaton’ny vahoaka Malagasy, miaina ao anatin’ny fahantrana. Niakatra koa izany taha izany. Tsy mba lanja miakatra fa… lanja midina ny filaharan’i Madagasikara raha ny maridrefy amin’ny fampandrosoana ny maha olona (indice de dévéloppement humain) ny taona 2015 teo: faha-154 amin’ny firenena 187 maneran-tany.
Hahazo volabe izany izao, amin’ity hoe “fivoriamben’ny mpamatsy vola”, nirodorodoan’ny mpitondra fanjakana any Paris (Frantsa) ity? Aoka fotsiny, aoka tsy hanonofy isika… Trosa be hobaben’ny taranaka aoriana ny ao ambadik’izany. Lanja miakatra, lanja midina…